Tennis Tennis USA na Blossom Hotel Houston na -esonye ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Tennis Tennis USA na Blossom Hotel Houston na -esonye ugbu a
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Tennis USA USA (USATT) na Blossom Holding Group kwupụtara taa na akpọrọ Blossom Hotel Houston ụlọ ọrụ gọọmentị maka USATT. N'okpuru nkwekọrịta ahụ, uwe ndị otu egwuregwu tebụl mba US ga-egosipụta akara nke Blossom Hotel Houston, ụlọ nkwari akụ dị elu nke okomoko pụrụ iche nke dị na ogbe ndịda Houston.
Blossom Hotel Houston na -atụ anya inye USA Player Tennis ndị na -egwu egwuregwu na ndị na -akwado ahụmịhe ile ọbịa Houston mara mma na ezigbo ya.
Ọ dị n'ime ime anya nke mpaghara ebe ngosi nka a ma ama yana ebe ịzụ ahịa, ebe iri nri na ebe ntụrụndụ dị.
Blossom Hotel Houston nwere ike bụrụ onye ama ama maka inyeghachi obodo Houston.
“Obi dị anyị ụtọ ịnabata gị Blossom Hotel na Houston n'ime ezinụlọ USATT, "Onye isi ndị isi ala Virginia Sung kwuru. “Ọ bụghị naanị na ụlọ nkwari akụ ahụ bụ ọmarịcha ụlọ ọgbara ọhụrụ nwere ihe ndị mara mma, kamakwa ndị nwe ya egosipụtala nkwa siri ike iji meziwanye ọnọdụ ndị bi na obodo Houston. Ndị otu mba United States ga -enwe mpako iyi logo Blossom na mmemme anyị niile. "
Onye isi ụlọ nkwari akụ Blossom Houston, Charlie Wang kwuru, "Ọ bụ nnukwu ihe ùgwù anyị na ndị otu egwuregwu table tennis nke USA na -enye nkwado na nkwanye ugwu maka ndị otu egwuregwu Tennis National US." "Dị ka ụlọ nkwari akụ kachasị ọhụrụ nke Houston, anyị na -atụ anya inye USA Player Tennis ndị na -egwu egwuregwu na ndị na -eso ya ahụmịhe ile ọbịa Houston mara mma na ezigbo ya."
Agbata obi ya na ama ama Texas Medical Center na ogbe ndịda Houston, na Ụlọ nkwari akụ Blossom dị anya site na mpaghara ebe ngosi nka a ma ama, ebe ịzụ ahịa, ebe iri nri na ebe ntụrụndụ dị. N'ikwekọ na aha otutu Houston dị ka Space City, Blossom na-egosipụta atụmatụ ime ihe pere mpe nke sitere n'ike mmụọ nsọ. N'inwe ụlọ ezumike 267 dị okomoko, ụlọ elu okomoko nke iri na isii na-enye ihe karịrị 9000 ụkwụ nke ohere nzukọ na-agbanwe agbanwe yana ebe mgbatị ahụ dị mma Peloton®. A na -ewepụta Okooko osisi na ọmarịcha ọdọ mmiri na ụlọ ezumike nke na -enye echiche sara mbara nke ime obodo Houston.
N'oge mmalite ya, Blossom Hotel Houston nwere ike bụrụ onye ama ama maka inyeghachi obodo Houston. Na mgbakwunye na inye ndị bi na mpaghara ọrụ karịrị ọrụ 150 a na -enye n'oge oke ọrịa, ikike nke Blossom nyekwara akụrụngwa na nka ya iji nyere ndị nọ na mkpa aka n'oge oke mmiri oyi na -emebi n'oge na -adịbeghị anya na Texas, dị ka onye nwe Charlie Wang. Ụlọ ọrụ na -ewu ihe mebiri site na ọkpọkọ mmiri butere ihe karịrị ezinaụlọ obodo 120.
A ga -egosipụta akara nke Blossom Hotel na yunifọm Ndị otu tebụl mba Amerịka na -amalite ozugbo.
La Réunion na-agba ọsọ na Seychelles n'ihu ikuku ...
Emechiri Moscow Red Square mgbe mgbidi Kremlin ...